1. Waa maxay farsamaynta saxda ah?
Sax Mashiinka waa hannaan wax looga soo saaro goob shaqo inta lagu jiro dhammaystirka dulqaadka. Mashiinka saxda ah wuxuu leeyahay noocyo badan, oo ay ka mid yihiin axdi qarameedka, leexashada iyo mashiinka dheecaanka korontada. Mashiinka saxda ah maanta ayaa guud ahaan la xakameeyaa iyadoo la isticmaalayo Kontaroolada Lambarada Kombiyuutarka (CNC).
Ku dhawaad ​​dhammaan alaabada birta ah waxay adeegsadaan mashiinno sax ah, sida aalado kale oo badan sida caag iyo alwaax. Mashiinadan waxaa ka shaqeeya farsamayaqaano takhasus leh oo tababaran. Si aaladda wax -goynta ay shaqadeeda u qabato, waa in loo dhaqaajiyaa jihooyinka la cayimay si goynta saxda ah loo sameeyo. Dhaqdhaqaaqan asaasiga ah waxaa loogu yeeraa "xawaaraha goynta." Qalabka shaqada ayaa sidoo kale la dhaqaajin karaa, oo loo yaqaan dhaqdhaqaaqa labaad ee "quudinta." Wadajir, dhaqdhaqaaqyadan iyo fiiqnaanta aaladda goynta ayaa u oggolaanaysa mashiinka saxda ah inuu shaqeeyo.
Farsamaynta saxnaanta tayada waxay u baahan tahay awoodda lagu raaco naqshadaha aadka u gaarka ah ee ay samaysay CAD (naqshadaynta kombiyuutarka) ama barnaamijyada CAM (wax -soo -saarka kombiyuutarka) sida AutoCAD iyo TurboCAD. Softiweerku wuxuu kaa caawin karaa soo saarista kakan, jaantusyada 3-cabbir ah ama tilmaamaha loo baahan yahay si loo soo saaro aalad, mashiin ama shay. Naqshadahaan waa in la raacaa si aad u faahfaahsan si loo hubiyo in badeecadu ay ilaaliso daacadnimadeeda. In kasta oo inta badan shirkadaha farsamaynta mashiinnada ay la shaqeeyaan nooc ka mid ah barnaamijyada CAD/CAM, haddana waxay inta badan ku shaqeeyaan sawir gacmeedyo wejiyada hore ee naqshadeynta.
Mashiinka qumman waxaa loo adeegsadaa dhowr agab oo ay ka mid yihiin birta, naxaasta, garaafka, dhalada iyo balaastikada si loogu magacaabo dhowr. Iyada oo ku xidhan baaxadda mashruuca iyo qalabka la isticmaalayo, qalabyo kala duwan oo mashiinno sax ah ayaa la isticmaali doonaa. Isku-darka wax kasta oo isku-dhafan, mashiinnada wax lagu shiido, makiinadaha qodista, miinshayaasha iyo mashiinka wax lagu shiido, iyo xitaa robot-yada xawaaraha sare leh ayaa la isticmaali karaa. Warshadaha aerospace-ku waxay adeegsan karaan mashiinada xawaaraha sare, halka warshadaha samaynta alwaaxa laga yaabo inay adeegsadaan sawir-kiimikada sawir-qaadista iyo geedi-socodka wax lagu shiido. Ka bixitaanka orodka, ama qaddar gaar ah oo shay kasta oo gaar ah, wuxuu noqon karaa kumanaan, ama wuxuu noqon karaa dhowr. Farsamaynta saxnaanta badanaa waxay u baahan tahay barnaamijyada aaladaha CNC taas oo macnaheedu yahay inay kombuyuutar ahaan tirooyin ahaan gacanta ku hayaan. Qalabka CNC wuxuu oggol yahay cabbir sax ah in la raaco inta ay socoto badeecaddu.
2. Waa maxay qashin -qaadid?
Qodiddu waa hannaanka makiinadda ee adeegsiga jarayayaasha Rotary si wax looga saaro goob shaqo iyada oo la hormarinayo (ama la quudinayo) gooyaha oo loo rogo goobta shaqada ee jihada gaarka ah. Gooyuhu sidoo kale waxaa laga yaabaa in lagu hayo xagal ku beegan dhidibka aaladda. Qodista waxay dabooshaa noocyo kala duwan oo ah hawlgallo iyo mashiinno kala duwan, oo ka kala yimid qaybo yaryar oo shaqsiyeed ilaa hawlgallo qallafsan oo qallafsan. Waa mid ka mid ah hababka ugu badan ee loo adeegsado mashiinnada qaybaha caadadu u leedahay dulqaadka saxda ah.
Qodista waxaa lagu samayn karaa aalado badan oo mashiinno ah. Fasalka asalka ah ee qalabka mashiinka ee wax lagu shiido wuxuu ahaa mashiinka wax lagu shiido (oo badanaa loo yaqaan dhagaxshiidka). Ka dib markii uu soo ifbaxay kontoroolka tirooyinka kumbuyuutarrada (CNC), mashiinnada wax -qodista ayaa u xuubsiibtay xarumo mashiinno: mashiinnada wax lagu shiido oo lagu kordhiyay qalab beddelayaal otomaatig ah, joornaalada qalabka ama carousels, awoodda CNC, nidaamyada qaboojiyaha, iyo xirmooyinka. Xarumaha wax -qodista waxaa guud ahaan lagu tilmaamay inay yihiin xarumo mashiinno toosan (VMCs) ama xarumo mashiinno toosan (HMCs).
Isdhexgalka miro -dhalinta oo isu beddelaysa deegaanno, iyo si kale, waxay ku bilaabatay qalab -ku -nooleynta laydhka iyo marmar isticmaalka mishiinnada hawlgallada leexashada. Tani waxay horseeday fasal cusub oo ah qalabka mashiinnada, mashiinno badan (MTMs), kuwaas oo ujeeddo loo dhisay si loo fududeeyo wax-shiqidda iyo jeesashada isla baqshadda shaqada.
3. Waa maxay sax mashiinka CNC？
Injineerada naqshadeynta, kooxaha R&D, iyo soo -saareyaasha ku tiirsan qaybinta qaybinta, mashiinnada CNC ee saxda ah waxay u oggolaaneysaa abuurista qaybo adag iyada oo aan la samayn wax dheeri ah. Dhab ahaantii, saxnaanta mashiinka CNC badiyaa waxay suurtogal ka dhigaysaa in qaybaha la dhammeeyey lagu sameeyo hal mashiin.
Habka makiinaddu wuxuu ka saaraa alaabta wuxuuna adeegsadaa aalado badan oo wax lagu gooyo si loo abuuro naqshadda ugu dambaysa, oo inta badan aad u adag, naqshadaynta qayb. Heerka saxnaanta waxaa lagu wanaajiyaa adeegsiga kontoroolka tirooyinka kumbuyuutarka (CNC), kaas oo loo adeegsado si otomaatig ah u xakameynta aaladaha makiinadaha.
Doorka "CNC" ee mashiinka saxda ah
Adigoo adeegsanaya tilmaamaha barnaamijka summada leh, mashiinnada CNC ee saxda ah waxay u oggolaaneysaa in shaqada gooynta la gooyo oo loo qaabeeyo qeexitaannada iyada oo aan gacan -ku -haynta mashiinka.
Qaadashada tusaalaha naqshadaynta kombiyuutarka (CAD) ee uu bixiyay macmiilku, farsamo yaqaan khabiirku wuxuu adeegsadaa software -ka wax -soo -saarka kombiyuutarka (CAM) si loo abuuro tilmaamaha lagu farsameeyo qaybta. Iyada oo ku saleysan qaabka CAD, softiweerku wuxuu go'aamiyaa waddooyinka aaladda loo baahan yahay wuxuuna soo saaraa koodhka barnaamijka ee u sheegaya mashiinka:
■ Waa maxay RPM -yada saxda ah iyo qiimaha quudinta
■ Goorta iyo meesha loo raro aaladda iyo/ama qalabka shaqada
Deep Intee in le'eg ayay wax u gooyaan
■ Goorta la dalbado qaboojiye
■ Wax kasta oo kale oo la xiriira xawaaraha, heerka quudinta, iyo isku -duwidda
Xakameeyaha CNC ayaa markaa adeegsada koodhka barnaamijka si uu u xakameeyo, u shaqaysto, ulana socdo dhaqdhaqaaqa mashiinka.
Maanta, CNC waa astaamo ku dhex jira qalab kala duwan, laga bilaabo laalaabyada, mishiinnada, iyo jiheeyeyaasha ilaa siligga EDM (mashiinnada dheecaanka korontada), laser, iyo mashiinnada goynta plasma. Ka sokow otomaatiga habka mashiinka iyo kor u qaadista saxnaanta, CNC waxay tirtiraysaa shaqooyinka gacanta waxayna sii deyneysaa mashiinnada si ay u kormeeraan mashiinno badan oo isku mar shaqeeya.
Intaa waxaa dheer, mar haddii la diyaariyey dariiqa aaladda oo mishiin la qorsheeyey, waxay socon kartaa qayb dhowr jeer ah. Tani waxay bixisaa heer sare oo sax ah iyo soo noqnoqosho, taas oo iyaduna ka dhigaysa geedi socodku mid aad u qiimo badan oo wax -ku -ool ah.
Qalabka la farsameeyo
Qaar ka mid ah biraha sida caadiga ah loo farsameeyo waxaa ka mid ah aluminium, naxaas, naxaas, naxaas, bir, titanium, iyo zinc. Intaa waxaa dheer, alwaax, xumbo, fiberglass, iyo balaastik sida polypropylene ayaa sidoo kale la farsameyn karaa.
Dhab ahaantii, wax kasta oo ku saabsan wax kasta ayaa loo adeegsan karaa mashiinnada CNC ee saxda ah - dabcan, waxay kuxirantahay dalabka iyo shuruudaha.
Qaar ka mid ah faa'iidooyinka mashiinka CNC ee saxda ah
Qaar badan oo ka mid ah qaybaha yaryar iyo qaybaha loo adeegsado badeecooyin badan oo la soo saaray, mashiinnada CNC ee saxda ah badiyaa waa habka been abuurka ee doorashada.
Sida runta ah dhammaan hababka goynta iyo mashiinnada, walxaha kala duwan waxay u dhaqmaan si kala duwan, cabbirka iyo qaabka qayb ayaa waliba saamayn weyn ku leh geeddi -socodka. Si kastaba ha noqotee, guud ahaan geedi socodka saxnaanta mashiinka CNC wuxuu bixiyaa faa'iidooyin hababka kale ee makiinadaha.
Taasi waa sababta oo ah mashiinka CNC wuxuu awood u leeyahay inuu bixiyo:
Degree Heer sare oo kakan qayb ahaan
Tole Dulqaadyada adag, sida caadiga ah waxay u dhexeeyaan ± 0.0002 "(± 0.00508 mm) ilaa ± 0.0005" (± 0.0127 mm)
Surface Dusha sare ee si siman u dhammaata, oo ay ku jiraan dhammaystirka caadadu
Pe Dib -u -noqosho, xitaa marka la eego mugga sare
In kasta oo farsamayaqaan xirfad leh uu adeegsan karo lathe manual si uu uga sameeyo qayb tayo leh tiro ahaan 10 ama 100, maxaa dhacaya marka aad u baahan tahay 1,000 qaybood? 10,000 qaybood? 100,000 ama milyan qaybood?
Iyada oo la adeegsanayo mashiinnada CNC ee saxda ah, waxaad ku heli kartaa baaxadda iyo xawaaraha loo baahan yahay nooca wax soo saarka mugga badan. Intaa waxaa dheer, soo noqnoqoshada sare ee mashiinka CNC ee saxda ah wuxuu ku siinayaa qaybo isku mid ah bilow ilaa dhammaad, iyada oo aan loo eegin inta qaybood ee aad soo saareyso.
4. Sida loo sameeyo: waa maxay hababka iyo qalabka inta badan loo adeegsado farsamaynta saxda ah?
Waxaa jira habab aad u khaas u ah mashiinnada CNC, oo ay ku jiraan siligga EDM (mashiinka dheecaanka korantada), mashiinnada lagu daro, iyo daabacaadda laser 3D. Tusaale ahaan, siligga EDM wuxuu adeegsadaa agab tabiya -sida caadiga ah biraha -iyo dheecaannada korontada si ay ugu daadiyaan goob shaqo qaabab adag.
Si kastaba ha noqotee, halkan waxaan diiradda saari doonnaa geeddi -socodka wax -shiqidda iyo leexashada - laba hab oo kala -goyn ah oo si ballaaran loo heli karo oo inta badan loo adeegsado saxnaanta mashiinka CNC.
Shiraacid iyo leexasho
Wax -qodistu waa geedi socod makiinado oo adeegsada aalad goynaysa oo wareegsan oo wareegsan si meesha looga saaro alaabta loona abuuro qaabab. Qalabka wax lagu shiido, oo loo yaqaano dhagaxshiidka ama xarunta mashiinnada, ayaa ku dhammaystira koonkan joomatari qayb adag leh qaar ka mid ah walxaha ugu waaweyn ee birta lagu farsameeyo.
Astaamaha muhiimka ah ee wax -ku -shiididda ayaa ah in goob -shaqeedka uu ahaado mid taagan halka aaladda wax -goynta ay wareegeyso. Si kale haddii loo dhigo, dhagaxa, aaladda goynta wareegaysa waxay ku socotaa hareeraha goobta shaqada, taas oo ku harsan meel sariir ah.
Soo jeesashadu waa geedi socodka jarista ama qaabaynta qalabka shaqada ee qalabka loo yaqaan lathe. Caadi ahaan, lathe wuxuu ku wareejiyaa sheyga shaqada dhidib toosan ama toosan iyada oo aalad goyn go'an (oo laga yaabo ama laga yaabo in aysan miiqmin) ay la socoto dhidibka barnaamijka.
Qalabku jidh ahaan kuma wareegi karo qaybta. Maaddadu waxay wareegtaa, oo u oggolaanaysa aaladda inay fuliso hawlgalada barnaamijka. (Waxaa jira qayb hoosaadyo ah oo qalabku ku wareegsan yihiin silig caano lagu quudiyey, si kastaba ha ahaatee, taasi kuma jirto halkan.)
Marka loo leexdo, si ka duwan sida wax u qodista, shaqada goobtu waa wareegtaa. Qaybta qaybtu waxay shidaysaa dunmiiqa lathe -ga iyo aaladda wax -goynta ayaa lala xiriiriyaa qalabka shaqada.
Buugga iyo mashiinka CNC
In kasta oo mishiinnada iyo daahyada labadaba lagu heli karo moodooyinka gacanta, mashiinnada CNC ayaa aad ugu habboon ujeeddooyinka wax -soo -saarka qaybaha yaryar - iyagoo bixinaya cabbir -celin iyo ku -celcelin codsiyada u baahan wax -soo -saarka mugga sare ee qaybaha dulqaadka adag.
Ka sokow bixinta mashiinnada 2-dhidibka oo fudud oo aaladdu ku dhex dhaqaaqdo faasaska X iyo Z, qalabka saxda ah ee CNC waxaa ka mid ah qaabab dhidibyo badan leh oo shaqaaluhu sidoo kale dhaqaaqi karo. Tani waxay ka duwan tahay lathe meesha shaqada shaqadu ku kooban tahay wareejinta oo aaladuhu waxay u dhaqaaqi doonaan inay abuuraan joometeriga la rabo.
Isku-dubbaridyada dhidibbada badan waxay u oggolaanayaan soo-saarista joomatari ka sii qallafsan hal qaliin, iyada oo aan u baahnayn shaqo dheeri ah oo ka shaqeeya mashiinka. Tani kaliya ma sahlayso soo saarista qaybo adag, laakiin sidoo kale waxay yareysaa ama baabi'isaa fursadda qaladka hawlwadeenka.
Intaa waxaa sii dheer, adeegsiga qaboojiyaha cadaadiska sare leh oo leh mashiinka CNC ee saxda ah wuxuu hubiyaa in jajabku uusan gelin shaqooyinka, xitaa marka la isticmaalayo mashiinka leh dunmiiqa toosan.
Mashiinnada wax lagu shiido ee kala duwan waxay ku kala duwan yihiin cabbirkooda, qaabeynta dhidibka, heerka quudinta, xawaaraha goynta, jihada quudinta wax lagu shiido, iyo astaamaha kale.
Si kastaba ha noqotee, guud ahaan, mashiinnada CNC dhammaantood waxay adeegsadaan dunmiiqa wareegsan si ay u gooyaan wax aan la rabin. Waxaa loo isticmaalaa in lagu jaro biraha adag sida birta iyo titanium laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa agabyada sida caag iyo aluminium.
Mashiinnada CNC waxaa loo dhisay dib -u -celin waxaana loo adeegsan karaa wax walba laga bilaabo soo -saaridda ilaa soosaarka mugga sare. Mashiinnada CNC ee saxda ah ee aadka u sarreeya ayaa badiyaa loo adeegsadaa shaqada dulqaadka adag sida qashin-qubka shilalka ganaaxyada iyo wasakhaha.
In kasta oo wax-qodidda CNC ay bixin karto dib-u-rogid deg-deg ah, dhammaystirka la-milled wuxuu abuuraa qaybo leh astaamo qalab muuqda. Waxa kale oo laga yaabaa inay soo saarto qaybo leh geesaha fiiqan iyo guntimaha, sidaas darteed waxaa laga yaabaa in loo baahdo habraacyo dheeraad ah haddii geesaha iyo guntigu ay yihiin kuwo aan la aqbali karin sifooyinkaas.
Dabcan, aaladaha qashin -qubka ee loo diyaariyey isku xigxiga ayaa debrriri doona, in kasta oo sida caadiga ah la gaaro 90% shardiga la dhammeystiray ugu badnaan, taas oo ka tagaysa astaamaha qaarkood dhammaystirka gacanta ugu dambaysa.
Sida dhammaystirka dusha sare, waxaa jira qalab soo saari doona ma aha oo kaliya dhammaadka dusha la aqbali karo, laakiin sidoo kale dhammaystirka muraayadda oo kale ah oo ku saabsan qaybo ka mid ah alaabta shaqada.
Noocyada mashiinnada CNC
Labada nooc ee aasaasiga ah ee mishiinnada wax lagu shiido waxaa loo yaqaannaa xarumo mashiinno toosan ah iyo xarumo mashiinnada jiifta ah, halkaas oo farqiga koowaad uu ku jiro jihaynta mashiinka mashiinka.
Xarunta farsamaynta tooska ah waa dhagax-ku-yaal kaas oo dhidibka dunmiiqa uu ku beegan yahay jihada Z-axis. Mashiinnadaan toosan waxaa loo sii qaybin karaa laba nooc:
M Warshadaha sariirta, oo ay dunidu u barbar socoto dhidibka u gaarka ah iyada oo miiska uu si toos ah ugu wareegayo dhidibka dunmiiqa
M Warshadaha Turret, kaas oo dunmiiraddu ay taagan tahay miiskana la dhaqaajiyo si ay had iyo jeer u toosnaato una barbar socoto dhidibka dunmiiqa xilliga hawlgalka goynta
Xagga mashiinka mashiinka toosan, dhidibka dunmiiqa mishiinku wuxuu ku toossan yahay jihada Y-dhidibka. Qaab dhismeedka jiifa micnaheedu waa warshadani waxay u janjeeraan inay qaataan boos badan dabaqa dukaanka mashiinka; sidoo kale guud ahaan way ka miisaan culus yihiin kana awood badan yihiin mashiinnada taagan.
Warshadda jiifka ah ayaa inta badan la adeegsadaa marka loo baahdo dhammaystirka dusha sare; taasi waa sababta oo ah jihaynta dunmiiqa micnaheedu waa jajabka goynta ayaa si dabiici ah u dhaca oo si fudud looga saaraa. (Faa'iido dheeri ah, ka -qaadis wax -ku -ool ah ayaa gacan ka geysata kordhinta nolosha aaladda.)
Guud ahaan, xarumaha mashiinnada toosan ayaa aad ugu badan maxaa yeelay waxay u xoog badnaan karaan xarumaha mashiinnada jiifka waxayna xamili karaan qaybo aad u yar. Intaas waxaa dheer, xarumaha toosan waxay leeyihiin raad ka yar xarumaha mashiinnada toosan.
Warshadaha CNC-dhidibka badan
Xarumaha wax -soo -saarka CNC ee saxda ah waxaa lagu heli karaa faasas badan. Warshada 3-dhidibka ah waxay u isticmaashaa faasaska X, Y, iyo Z shaqooyin kala duwan. Iyada oo leh dhagaxa 4-dhidibka, mashiinku wuxuu ku wareegi karaa dhidibka toosan iyo midka toosan wuxuuna u dhaqaaqi karaa sheyga shaqada si loogu oggolaado farsamayn joogto ah oo joogto ah.
Warshada 5-dhidibku waxay leedahay saddex faasas dhaqameed iyo laba faasas oo kale ah, taasoo awood u siineysa in shaqada shaqada la wareejiyo marka madaxa dunmiiqa uu ku wareegayo. Tani waxay awood u siineysaa shan dhinac oo ah goob shaqo in la farsameeyo iyada oo aan meesha laga saarin shaqada iyo dib u dejinta mashiinka.
Lathe - oo sidoo kale loo yaqaan xarunta leexashada - waxay leedahay hal ama in ka badan oo dunmiiqa, iyo faasaska X iyo Z. Mashiinka waxaa loo adeegsadaa in lagu wareejiyo goob shaqo oo ku taal dhidibkeeda si loo sameeyo hawlgalyo goyn iyo qaabayn kala duwan, iyada oo la adeegsanayo qalab kala duwan oo loo adeegsado goobta shaqada.
Lathes CNC, oo sidoo kale loo yaqaan lathes tooling tooling live, ayaa ku habboon abuurista qaybo cylindrical ama spherical simmetrical ah. Sida mashiinnada CNC, lathes CNC waxay xamili karaan hawlgallada yaryar sida tusaalaynta laakiin sidoo kale waxaa loo diyaarin karaa soo noqnoqosho sare, oo taageerta wax soo saarka mugga sare.
Lathes CNC ayaa sidoo kale loo samayn karaa wax soo saar gacmo-la'aan ah, taas oo ka dhigaysa in si weyn loogu isticmaalo baabuurta, elektiroonigga, aerospace, robotics, iyo warshadaha qalabka caafimaadka.
Sida laydhka CNC u shaqeeyo
Iyada oo la adeegsanayo lathe CNC, baar madhan oo alaab alaab ah ayaa lagu shubaa guntiga sanduuqa daloolka. Jilibkani wuxuu ku haystaa goobtii shaqada halka dunmiiqa uu meerto yahay. Marka dunmiiqa uu gaaro xawaaraha loo baahan yahay, qalab goynta taagan ayaa la galiyaa sheyga shaqada si meesha looga saaro alaabta loona gaaro joometeriga saxda ah.
Lakabka CNC wuxuu samayn karaa dhowr hawlgal, sida qodidda, dunta, caajiska, dib -u -beddelidda, soo -jeedinta, iyo leexashada duubista. Hawlgallada kala duwan waxay u baahan yihiin isbeddel qalab waxayna kordhin karaan kharashka iyo wakhtiga dejinta.
Marka dhammaan hawlgallada mashiinnada loo baahan yahay la dhammaystiro, qaybta ayaa laga gooyaa kaydka si loo sii farsameeyo, haddii loo baahdo. Lakabka CNC ayaa markaa diyaar u ah inuu ku celiyo qaliinka, iyada oo wax yar ama aan lahayn waqti go'an oo dheeri ah oo badanaa loo baahan yahay inta u dhaxaysa.
Lathes CNC waxay sidoo kale dejin kartaa quudiyayaal baararka otomaatiga ah oo kala duwan, kuwaas oo yareynaya xaddiga maareynta alaabta ceyriinka ah oo bixiya faa'iidooyinka sida kuwa soo socda:
Yaree waqtiga iyo dadaalka looga baahan yahay hawlwadeenka mashiinka
Taageer barxadda si loo yareeyo gariirka oo si xun u saamayn kara saxnaanta
■ U oggolow aaladda mashiinka inay ku shaqeyso xawaaraha ugu fiican ee dunmiiqa
Yaree waqtiyada isbeddelka
Yaree qashinka maaddada
Noocyada lathes CNC
Waxaa jira dhowr nooc oo kala-goysyo ah oo kala duwan, laakiin kuwa ugu badan ayaa ah 2-dhidibka CNC lathes iyo hababka Shiinaha ee qaabka tooska ah.
Inta badan lathes CNC Shiinaha waxay isticmaalaan hal ama laba spindles oo waaweyn oo lagu daray hal ama laba gadaal (ama labaad), oo leh wareejin wareeg ah oo mas'uul ka ah kii hore. Spindle -ka ugu weyn wuxuu qabtaa hawlgalka mashiinnada asaasiga ah, iyadoo la kaashanayo bushing tilmaame.
Intaa waxaa dheer, qaar ka mid ah lathes-ka Shiinaha ayaa lagu qalabeeyay madaxa aaladda labaad oo u shaqaysa sida mashiinka CNC.
Iyada oo la isticmaalayo laynka otomaatiga ah ee CNC-China, alaabta kaydka ah ayaa lagu quudiyaa iyada oo dunta madaxa lagu simbiriirixo oo lagu rido duurka hagaha. Tani waxay u oggolaaneysaa aaladda inay gooyso maaddada meel u dhow meesha maaddada la taageeray, taasoo ka dhigaysa mashiinka Shiinaha gaar ahaan faa'iido muddo dheer, qaybo dhuuban oo jeestay iyo micromachining.
Xarumaha leexashada badan ee CNC iyo lathes-ka Shiinaha ayaa fulin kara hawlgallo badan oo makiinado iyadoo la adeegsanayo hal mashiin. Tani waxay ka dhigaysaa iyaga ikhtiyaar wax ku ool ah oo loogu talagalay joomatari-ka-adag oo haddii kale u baahan lahaa mashiinno badan ama isbeddello qalab iyadoo la adeegsanayo qalab sida warshad CNC dhaqameed.
La taaban karo Epoxy, Isbarbar dhigyada Granite Precision, Sax Granite, Sax Granite Cube, Sax Granite dusha sare, Qalinka Granit Square Ruler,